ငံုးဥ ႏွင္႔ တြဲဖတ္ၿပီး မစားသင္႔ေသာ အစားစာ
ငုံးဥကိုတော့ မသိတဲ့ လူဆိုတာ ရှားပါတယ်။ဒါပေမယ့် ငုံးဥထဲမှာ ဆိုရင် ဘယ်လို အာဟာရများစွာ ပါဝင်တာကိုတော့ သိတဲ့သူ ရှားပါးပါလိမ့်မယ်။ ငုံးဥထဲမှာ ပါတဲ့ အာဟာရ တန်းဖိုးဟာ ဆိုရင် ကြက်ဥ နှစ်လုံးစာနဲ့ ညီမျှတယ် ဆိုတာကော သိကြ ပါသလား။ ငုံးဥဟာ လူ့ရဲ့ အဆုတ်နဲ့ သရက်ရွက်ကို အားကောင်း စေပါတယ်။ ငုံးဥကို စားသုံးသင့်တဲ့ သူတွေကတော့ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ သွေးအားနည်းတဲ့ သူတွေ၊ ချူချာတဲ့သူနဲ့ မီးဖွားပြီး ခါစ မိခင်လောင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက် သွေးကြော ရှိတဲ့ သူတွေကတော့ ငုံးဥကို ပမာဏများစွာ မစားသင့်ပါဘူး။ ငုံးဥမှာ ပရိုတင်း၊အဆီ၊သံဓာတ် လက်စီသင် (Lecithin)၊ vitamin-A ၊ vitamin-B1 ၊ … Read more
Categories Food, Hearth Tags ငုံးဥ
ဆီလြန္ျခင္း၊ ေဗာက္ထျခင္း၊ ရင္သာကင္ဆာ ေ၀သနာတို႕အတြက္ သေျပသီး
ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာအတွက် သပြေသီး။ ဝမ်းတွင်းသို့ ရွှေမှုန့် ကြေးမှုန့် သံမှုန့် မြေဖြူ မှုန့် မြေကြီးမှုန့် ဆံပင်မွှေးများ စသည်တို့ ဝင်ရောက်၍ ဝမ်းဗိုက်အောင့်ခြင်း ထိုးခြင်းဖြစ်ပါက သပြေသီးကို သတိရကြပါ။ ၁။ သပြေသီးမှည့်ချိန်တွင် သပြေသီးမှည့်(၁၀)လုံးကို ဆားဖြင့် တို့စားခြင်းအား(၇)ရက်မှ ပြုလုပ်ပြီး(၇)ရက်ပြည့်လျှင် မန်ကျည်းဖျော်ရည် သောက်ပေးရသည်။ ဝမ်းတွင်းရှိ အမှုန့် အမွှားများ ဆံပင်ထွေးများ အညစ်အကြေးနှင့် အတူပါသွားတော့သည်။ ၂။ သပြေခေါက်ကို အမှုန့်လုပ်ပြီး နေ့စဉ် တစ်နေ့ ကော်ဖီဇွန်း(၁)ဇွန်း (၁)လတိတိ စားပြီး ဝမ်းနှုတ်ပေး၍လည်း မလိုလားအပ်သော အမှုန့်များ ဆံပင်ချည်ထွေးများ ကျစေပါသည်။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာတစ်ဦး ပြောပြသောနည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းပြုရာက ဝမ်းတွင်းသို့ ဆံပင်စများ ဝင်သည် များလာကာ ဗိုက်အောင့်သည်ဆို၍ ဆေးအမျိုးမျိုး … Read more
Categories Food, Hearth Tags သေျပသီး
ႏြားႏို႔ႀကိဳက္သူမ်ား မျဖစ္မေန သတိထားသင့္တဲ့ ႏြားႏို႔ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
August 27, 2020 by Nalonetar Diary
နွားနို့သောက်သူများသတိထားစရာပါ။ (၁) – နွားနို့ဆိုးကျိုး ယခင်က နွားနို့သောက်လျှင် ကယ်လ်ဆီယမ်အားကောင်း၍ အရိုးများကို ခိုင်မာစေ သည်ဟူ၍ ကလေး လူကြီးသောက်သုံးကြသည်။ ယနေ့ခေတ် နွားနို့သောက်ခြင်းသည် အရိုးပွရောဂါကို ဖြစ်စေခြင်း အကျိုးမဲ့စေသည့်အကြောင်းများရှိနေခြင်းကြောင့်နွားနို့ကို အသက်ကြီးသူများ သောက်ခြင်းနည်းလာသည်။ နွားနို့ကို သောက်မည်ဆိုလျှင် ကျက်ကျက်ဆူအောင်တည်ပြီးမှသောက်သင့်သည်။ နွားနို့ထဲတွင် ပါဝင်သော တီဘီပိုးသည့် တပွက်နှစ်ပွက်ဆူရုံနဲ့ သေသွားခြင်းမရှိပါ – နာနာဆူအောင်တည်ပြီးမှ သောက်သင့်သည်။ နို့စားနွားများမှ နို့များသည် – ဟော်မုန်းဆေးများ ထိုးခြင်း ပိုးသတ်ဆေးများသုံးခြင်း နွားနို့ အရောင်လှအောင် အရောင်ဆိုးခြင်း ။ ရောဂါဖြစ်စေခြင်း – နွားနို့သောက်လျှင် အချို ဓာတ်များ၍ ရင်ပြည့် အစာမချေနိုင်ခြင်း ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြင်း အဝလွန်ခြင်း အရိုးပွ ခြင်း အသက်ကြီးသူ ကလေးငယ်များ ဗိုက်နာ … Read more
Categories Food, Hearth Tags နွားနို့ဆိုးကျိုး
ပေါင်းတည်မြို့ ပုတီးကုန်းလမ်းမှကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးစံံချိန်၏ ဆေးနည်းလေးပါ။ ဝမ်းနုတ်ဆေး စားရန်မလို ဆံပင်ဆေးဆိုးရန် မလို ခံတွင်းနံ့ လုံးဝမနံ ဝမ်းပျော့ ဆံပင်နက်စေပါတယ်။ ဆေးနည်းကတော့ ကွမ်းရွက်နှင့်ဆားကို ပုံပါအတိုင်း ထမင်း စားပြီးတိုင်းစားပေးယုံပါပဲ။ ခံတွင်းနံ့ လုံးဝမနံံ စေရန် နောက်တစ်နည်း ရှိသေးတယ်။ ဒီနည်းကတော့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပါ။ အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးတွေကို အရည်ညှစ်ပြီး သောက်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့အသီး ကို ပါးပါးလှီးပြီး ရေထဲကို ထည့်ပေးပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲ တစ်ညသိပ်ပေးရင်တော့ ရေထဲကို ဗီတာမင်တွေ ရောက်သွားပါတယ်။ ဗီတာမင် စီပါတဲ့ သံပရိုသီး ၊ လိမ္မော်သီး ၊ ဘယ်ရီသီး တို့က ခံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူ Zawgyi ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ ပုတီးကုန္းလမ္းမွေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးစံံခ်ိန္၏ … Read more
Categories Food, Hearth Tags ဆား
စားအသောက်တွေမှာ ဖော်မလင် ပါ၊ မပါ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ..?
August 19, 2020 by Nalonetar Diary
ဖော်မလင် (Formalin) အကြောင်း သိကောင်းစရာ… ဒေါက်တာဒေါ်ဇင်ဇင်နွယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး (အငြိမ်းစား) အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Q. ဖော်မလင်အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။ A. ဖော်မလင်ဆိုတာ အရောင်အဆင်းမရှိ၊ အနံ့ပြင်းတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် (formaldehyde)၊ မက်သနော (methanol)၊ ရေ (water) စုပေါင်းထားတဲ့ အရောအနှောတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖော်မလင်အရည်မှာ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ပါ၀င်ပါတယ်။ Q.. ဖော်မလင်ကို သဘာ၀အားဖြင့် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာမ။ A. ဖော်မလင်ကို အဓိကအားဖြင့် လူသေတွေကို ကြာရှည်ခံအောင် စိမ်တဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ ပြီးတော့- ပိုးသတ်ရာမှာ သုံးပါတယ်၊ ကြမ်းခင်းတွေ၊ အ၀တ်အစားတွေ၊ သဘောင်္တွေနဲ့ သိုလှောင်ရုံတွေကို … Read more
Categories Food, Knowledge Tags ဖော်မလင်